Nhau - Matipi ekudzikisa emagetsi magetsi mune majuzi
Paunenge uchipfeka uye kubvisa juzi, uchibatana nevamwe, kana netsaona uchibata zvinhu zvesimbi, zvinowanzoburitswa kamwe kamwe. Iwe unogona kunge uchiona magetsi emagetsi mumhepo. Kwete chete maoko ako achakuvara, asi zvakare kazhinji static magetsi uye kuburitsa zvinokanganisa rako rakajairika basa nehupenyu.
Masweat anowanzo gadzikana magetsi, nekuti ganda redu, dzimwe mbatya uye majuzi zvinosangana nekukweshana, kunyanya kana kupfeka kana kubvisa hembe, static magetsi anoungana zvishoma nezvishoma. Kana ichinge yaungana kusvika padanho repamusoro, inozoburitswa zvese kamwechete, uye kubuda kuchazoitika.
Bvisa magetsi emagetsi akagadzirwa pajuzi: Usati waisa uye kubvisa juzi, shandisa chinhu chesimbi kubata juzi. Kana kupfeka simbi bhurocha kuitisa static magetsi anotakurwa nejuzi.
Dzivisa kupfeka majuzi akagadzirwa nemakemikari tambo, nekuti kukakavadzana pakati pemakemikari tambo nemuviri wako kunowanzo gadzira static magetsi. Pfeka shangu dzematehwe kupfuura shangu dzerabha, nekuti zvigadzirwa zverabha zvinodzivirira kuitisa kwemagetsi, zvichitungamira mukuunganidzwa kwemagetsi emagetsi.
Deredza kugadzirwa kwemagetsi emagetsi pamajuzi: tenga softener kana pfapfaidzo yebvudzi uye umwaya iwo pajuzi kudzivirira static magetsi. Nekuti softener inogona kuwedzera hunyoro hwejuzi, uye vhudzi rebvudzi rinogona kudzikisira magetsi emagetsi. Kana shandisa tauro rakanyatsosaswa nemvura uye rakadonhedzwa nemvura kupukuta juzi. Nyorovesa juzi zvishoma kuti uderedze muyero wekuoma kwejuzi uye kudzikisira kugadzirwa kwemagetsi emagetsi.
Natsiridza nzira yekugeza majuzi: wedzera kubheka soda, chena vhiniga kana softener kana uchisuka majuzi. Inogona kupfekedza mbatya, kudzikamisa kuoma kwezvinhu, uye kubatsira kudzikisira magetsi.
Wedzera hunyoro hwezvakatipoteredza: Kana mamiriro ekunze akaoma, mari yemagetsi yakaunganidzwa haigone kuendeswa kumhepo. Unogona kushandisa humidifier kuwedzera humidity mumhepo, kana kuisa tauro nyoro kana girazi remvura pane heater kuti iite zvakafanana.
Zora ganda: Isa mafuta ekunyorovesa munzvimbo dzeganda dzinosangana nemajuzi kana bvudzi rakapinza zviri nyore uye mapepa akatetepa. Kwete chete iro ganda rinogona kuchengetedzwa munguva yakaoma yechando, asi kunyangwe iro ganda rakazorwa rakabatana nejuzi zvinhu, hazvisi nyore kugadzira static magetsi.